Raadi My iPhone waa hal-abuurnimo cajiib ah in Apple la iman laga bilaabo June 2010 macaamiishu MobileMe. Hadda waxa la la dhexgeliyey iCloud. Waa muuqaal cabsi badan ayaa u jawaabay oo ay baryadii kuwa lumay laga yaabaa iPhone ama kuwa rumeeyey waxaa laga yaabaa in aanay awoodin in ay joojiyaan tuugo ka helaan macluumaad gaar loo leeyahay. Hadda, mahad Raadi My iPhone on www.icloud.com , waxaa jira hab ah inaad ilaaliso warbixin ku saabsan telefoonka lumay ama la xaday - oo laga yaabo in ay u soo kabsaday.
Raadi My iPhone tagaa waddada u xaareysaa caawiyo koobto hoos meesha iPhone laga yaabaa in haddii aad la aan horey meesha ugu horeysa. Thanks to sawirka dayax-gacmeedka iyo khariidaynta, waxaa tusi doonaa meesha aad iPhone yahay, la siiyaa qalab ku leedahay calan iyo quwada on.
Raadi My iPhone waa la heli karo internet-ka ku xiran wax computer, kiniin ama qalab Xararad, in website-ka mahad www.icloud.com . Gelitaanka in goobta siinayaa fursad ay ku helaan Raadi My iPhone screen, oo markaas ku siinayaa ikhtiyaarka ah xulashada qalabka saxda ah ee aad raadinayso si aad u heshid. Waa in la ogaadaa in halkan oo kaliya qalabka kuwa, haddii ay yihiin iPhone, iPods, iPads ama kombiyuutarada Mac, la hel My iPhone karti, ku shaqayn karaa. Marka aad hesho adeega, waxaad arki doontaa wax u egtahay sidan oo kale:
Sidee Raadi My iPhone Works:
First of dhan, Raadi adeeg My iPhone ka shaqeeya oo keliya haddii aad iPhone ku yahay oo uu leeyahay calan. Haddii aanay iyo uusan haysan signal ah, adeega ma shaqeyn doonto, inkasta oo waa inaad ugu yaraan awoodaan si ay u arkaan in ama aan telefoonka waa ku. Adeegga waxaa kale oo ma shaqeyn doonaan haddii iPhone ayaa la wareegay Diyaaradeed Mode.
Yidhi Dhammaan, waxaad u baahan tahay in ay diiradda saaraan goorta iyo sida Raadi My iPhone Sidee buu u shaqeeyaa. First of dhan, haddii app uu kula yimaado iPhone ama Mac, iyo iPhone hadda sameeyaa, aad u baahan tahay si ay u gudato. Tani waxay talaabo ee geedi socodka waa mid fudud. Tag Settings, ka jaftaa iCloud oo ka dhacay slider by Raadi My iPhone si ay u muujinaysaa cagaaran ama ayaa sheegay in "ON", taas oo ku xidhan version macruufka ee aad qabto. Waa inaad sidoo kale in la hubiyo in aad Services Location u wareegeen on. Haddii aan Adeegyada Goobta, ma waxaad awoodi doontaa inaad aragto si sax ah meesha qalabka laga yaabaa.
Marka iPhone maqan yahay ama uu lumo, waxaad isticmaali kartaa your computer in la furo website-ka www.icloud.com/#find . Saxiix in la xisaabtaada iCloud. Laga soo bilaabo shaashadda, xulo iPhone, markaas waa inaad heshaan karo, ciyaaro dhawaaqa, ku rid hab lumay ama la tirtiro dhammaan xogta ku saabsan iPhone fog. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha 4, hubi macluumaadka soo socda.
Afar Features ee Raadi My iPhone
Waxaa jira afar qaababka kala duwan ee adeegga Raadi My iPhone:
Hel Device: Haddii signal aad iPhone ay ka shaqaynayso oo weli meel baa xoog u socda unit iyo inaad Location Services karti aad iPhone, u socda www.icloud.com/#find kuu ogolaaneysaa in aad si aad u aragto meesha iPhone hadda waa. Waxaa laga yaabaa inaad gasho iCloud, laakiin markii aad login, waxaa lagu dejin doonaa shaashadda Raadi My iPhone.
Play Sound: function Tani gaar ahaan waa cajiib waxtar leh haddii aad hubto in aad iPhone meel ku jiro u dhow. Ugu 5 dura labaad, iPhone "ping" aad u qaylo dheer ilaa aad ka heli doonaa qalab iyo aad u hesho la soo dhaafay screen guriga. Marka aad firfircoonaan shaqo Sound Play ah, waxaa laguu soo diri doonaa ogeysiis ah in shaqo la firfircoonaan. Marka helo qalabka iyo helitaanka maraya shaashad guriga, dhawaaqa ka joojin doonto ciyaareed.
Lumay Mode, hab u Khasaaray waa hawl anfacaya laga heli karaa Raadi My iPhone in kuu ogolaanayaa inaad meel fog laga xirto iPhone la habayn ah. IPhone ayaa sii joogi doonaa ilaa xiran waxaa la helay iyo habayn la galay. Waxa ugu fiican waa, haddii lumay Mode la doorto, laakiin Adeegyada Goobta la demiyo, Adeegyada Goobta la demin doonaa ilaa telefoonka laga helo. Taasi oggolaanayaa raadraaca fudud ee qalabka.
Masixi iPhone: Marka dhan kale ku guuldareysto oo ku rajo weyn in iPhone ka soo baxo ma eegto, waxa kale oo aad leedahay fursad aad ku tirtiro iPhone ka fog. Dhab ahaantii, tani waa fursad ugu dambeeya, laakiin mid ka mid ah in weli uu furan yahay in aad haddii aad aaminsan tahay ma noqon doonto aad awoodaan inay ka bogsadaan iPhone Khasaaray. Tani waxay, sidoo kale, tuugo ka hortagi doonaa inay helaan warbixin qiimo leh ka iPhone, sida liiska xiriirada ama wax kasta oo kaararka laga yaabaa in aad u badbaadiseen via Passbook aad, tusaale ahaan.
Sida loo sahlo Raadi My iPhone:
1). Sahlo Raadi My iPhone on iPhone / iPad / iPod taabto: Settings tuubada> markaas iCloud. Waxaa jira qaar ka mid ah fursadaha u qabo qaybta iCloud ah. Mid ka mid ah ayaa aad rabto in aad ku shaabbadaysan Raadi My iPhone. Toggling slider ogolaan doonaa in aad awood u function ku saabsan iPhone. Si aad u dami ama gab Raadi My iPhone on iPhone, iPad ama iPod taabto, kaliya mari My button iPhone in OFF Raadi.
2). Awood Raadi My Mac Mac aad: Tag Apple Menu> rabtid System> iCloud. Tani waa, dabcan, arrin la mid ah shaashadda aad iPhone aad aragto dul suuragelinayo in Raadi My iPhone shaqeynayaan. Saxiix in la xisaabtaada iCloud.
3). Ku dar qalab Helo My iPhone: dadka qaar ma garanayaan sidii ay ku darto badan ama dadka kale ee iPhone, iPad, iPod ama in Raadi My iPhone. Waxaa aad u sahlan, kaliya isticmaalaan iPhone inay gasho in la ID Apple iyo awood Raadi My iPhone (Settings> iCloud> gasho la ID Apple aad> awood Raadi My iPhone).
Isticmaalka shaqeynta ee app ah sida Raadi My iPhone (ama hel My Mac, sida laga yaabaa in kiiska) waa hab fiican si loo hubiyo in aad leedahay hab inuu ka soo kabsado qalabka aad ka maqan, waa in aad si macquul ah qaarkood qalabka ka maqan waa meel gudahood u dhow. Dhagaysiga "ping" ee Play shaqada Sound ee Raadi My iPhone waa ku kalsoonaan la yaabka lahaa, sida aad ogaada qalabka waa meelaha aad degdeg ah, si aad u baahan tahay oo dhan lahaa inaad kaga bilowdo qabashadeeda guurayaan waxyaabaha ku xeeran si ay si ku habboon baadhaan.
Dabcan, hel My Mac ayaa sort la mid ah fursadaha sida Raadi My iPhone, halkaas oo aad ka geli kari lumay Mode iyo in la hubiyo in mid ka mid ma heli karaa mishiinka haddii uusan ogayn waxa sirta ah waa xaq.
Si aad u isticmaasho shaqeynta ee Raadi My iPhone - gaar ahaan fursad u masixi aad iPhone fog, waa in aad hubiso in iPhone ayaa la xaday, sababtoo ah marka aad masixi dhamaan xogta, iyagu ma ay la soo kabsaday karo.
> Resource > iPhone > Hel My iPhone: Sida loo Setup, sahlo, Disable iyo Isticmaal